Afrika, 09 April 2019
Talaado 9 April 2019
ONLF: Dhibaatooyin ayaa ka jira Gobolka Soomaalida
Madaxda Ururka ONLF ayaa sheegay inay dhul ballaaran oo ku yaalla Gobolka Soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xoogan oo haysta dadka deegaanka.
Rasaas laga maqlayo Khartoum iyo dibad-baxyo weli socda
Rasaas ayaa maanta laga maqlayey dibedda xarunta ciidamada milatariga dalka Sudan ee magaalada Khartoum, ayada oo dibad-baxyada lagu dalbanayo inuu is-casilo madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir ay galeen maalintii 4-aad oo xiriir ah.
Rwanda oo xusaysa sanad-guuradii 25-aad ee xasuuqa
Dalka Rwanda ayaa xusaya 25 guuradii kasoo wareegatey markii wadankaasi uu ka dhacay xasuuqii ugu xumaa dhowaantan oo ay dunidu aragto.
Sudan: Dibad-baxayaal hor degay guriga Al-Bashiir
Ciidamada milatariga dalka Sudan ayaa lagu daad gureeyey xaruntooda magaalada Khartoum, ayada oo kumanaan dibad-baxayaal ah ay ku boorinayaan inay ku biiraan baaqyada ku saabsan in madaxweyne Cumar Xasan Al-Bashiir u is-casilo.
32 qof oo ku dhintay dagaalka Libya
Ugu yaraan 32 qof ayaa ku geeriyooday, 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Libya iyo kuwa Jeneralka isku dayaya inuu afgambiyo ee Khalifa Haftar, sida ay sheegtay dowladda.